Al Shabaab oo afar ruux ku toogatay degmada Bu'aalle
BU'ALLE, Soomaaliya - Kooxda Al Shabaab ayaa sheegtay in afar qof ay maanta ku toogatay magaalada Bu'aalle ee gobolka Jubbada dhexe, kadib markii ay ku heshay falal jaajuusnimo.
Raggan la toogtay oo lagu kala magacaabi jiray Cabdirisaaq Xaashi Cabaas, Cumar Cadar Cumar, Maxamed Aba Mayow iyo Mustaf Maclin Xasanm, ayaa waxaa xukuntay maxkamad gaar ah oo ay leedahay Al Shabaab.
Boqolaal qof oo caruur iyo haween ay kamid ahaayeen ayaa ka qeyb-galay toogashada afarta qof, iyadoo goobta lagu dilay ay joogeen Saraakiil katirsan kooxda, oo dadka la hadlay.
Mustaf iyo Cabdirisaaq waxay Al Shabaab ku eedaysay inay la shaqeynayeen Sirdoonka dowladda Itoobiya, halka labada kale ay la shaqeynayeen Hay'adda NISA ee dowladda Federaalka Soomaaliya.
Inta badan Al Shabaab ayaa deegaanada ay maamusho ee Koonfurta iyo Bartamaha dalka ka fulisaa xukunada noocan ah, iyadoo aan jirin qareeno loo qabto eedaysaniyaasha.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dedaallo ugu jira inuu mideeyo cudada ciidana qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyada, si ay duulaan ugu qaadaan Al Shabaab, oo laga sifeynayo guud ahaan dalka.
Soomaliya 14.01.2019. 00:44
Labadan koox ayaa dhowr jeer ku dagaalamay gobolka Bari, waxaana ay isku dileen xubno.